Sawiro: Kumanaan qof oo xalay ka soo qaybgalay xafladii Kulanka Jaaliyada UK iyo Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye oo ka dhacday Magaalada London | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Sawiro: Kumanaan qof oo xalay ka soo qaybgalay xafladii Kulanka Jaaliyada UK iyo Gudoomiyaha Xisbiga Kulmiye oo ka dhacday Magaalada London
Published on October 16, 2016 by sdwo · No Comments
Xafladan oo ahayd tii ugu balaadhanayd ee taariikhda xisbiga Kulmiye lagu qabto magalaada London ayaa waxa ka soo qaybglay kumanaan qof oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga ee UK, Holland, Sweden, Belgium, iyo North America. Xafldan oo ka dhacday Hotelka weyn ee caanka ah ee Millennium Gloucster Hotel ee badhtamaha magaalada Lodon ayaa dadkii ka soo qaybaygalay ay kor u dhafeen 2 kun oo qof halka dad ka badan kun qofna albaabka laga celiyey ka dib markii shaqaalahii hotelku sheegeen in uu buuxdhaafay hall ka hotelku oo aan cid danbe loo ogolaandoonin.
Gudoomiyaha ahna musharaxa Xisbiga Kulmiye Muj. Muuse Biixi Cabdi oo hadal dheer halkaas ka jeediyey ayaa dhawr qodob oo muhiim ah ku soo qaaday qudbadiisii kuwaasi oo gun dhig u ah ololaha doorashada xisbiga Kulmiye. Qodobada uu wax ka taabtay gudoomiyahu wax ka mid ah isagoo balanqaaday inuu dhinaca tayada iyo xaquuqda ciidnaka uu wax weyn ka qabandoono oo anay dhicidoonin in askari hawl qaran kaga maqan caruurtiisu aanay ku dhicin waxbarasho la,aani, laakiin uu suurtogelindoono inay wax ka bartan iskuulada ugu wanaagsan.
Waxa kale uu ka hadlay dhinaca nabadgelyada oo uu sheegay inuu sii adkayndoono sharciguna shaqayndoono oo laga bixidoono in odayaal ay xukun dil ah ama faroxumayn ah ay maxkmada kala soo baxaan iyagoo ku dooday reernimo ayaan ku dhamaysanaynaa. Waxa kale oo uu ka hadlay dhinaca tayaytan waxbarashada oo uu yidhi kulmiye doorkii hore waxbarashada bilaashkii uu ka dhigay waxay keentay culays weyn oo miisaaniyadii xukuumada soo fuushay. Sidaas darteed imikana waxa la leeyahay dugsiyada sarana bilaash ma ka dhigaysaan, waxaanu cadeeyay inaan bilaash dugsiyada sare hadda laga dhigidoonon sababtoo ah wuxuu yidhi horta waxa loo baahanyahay kuwaas hore ee bilaashka laga dhigay in tayadood waxbarasho kor loo qaado iyo maclimiin ku filanba ay heelaan.
Waxa kale oo uu ka hadlay dhinaca dhaqaalaha oo uu yidhi hadii inagu isku tashano dhaqaalaheenu wuu inaga badanyahay oo cahsuurta lawadabixiyo, waxanu yidhi waa inagu ceeb inagoo sanadkaste qaad ku cuno 48 million oo dollar inaan aduunka nidhaah naga soo caawiya waxbarashada caruurtayada naga soo caawiya talaalka caruurtayada. Waxaanu yidhi waxaan rabnaa inaan nidaam u samaysano sidii looga gudbilahaa qabyaalada iyo qaadka. Waxa kale oo uu ka hadlay dhinaca cadaalada oo uu balanqaaday dalka koone kasteba in cadaaladu gaadho oo sharcigu shaqeeyo, waxaanu yidhi si cadaalad loo helo waxaan u sheegay in rag badani kuraasta ay baneeyaandoon oo beelaha aan maamulka ka dhex muuqani ay xaqoodii helaan. Waxa kale oo uu ka hadlay inuu sii horemarindoono dhinaca arimaha dibada oo dalalka aynu xidhiidhka la leenahay uu xidhiidhkeenu noqdo ku laba dhinac ah. Waxa kale oo uu ka hadlay dhinaca horumarinta dhalinyarada iyo shaqo abuurka. Dhinaca kale wuxuu qurbojooga u soo jeediyey inay dalka yimaadaan oo si mudadawacnimo ah ay dalkooda ugu shaqeeyaan si iskaa wax u qabso ah oo gacmaha ay dhagaxaanta ku guraan. Waxa kale oo uu balanqaaday in qurbojooga dhulalka waaweyn iska iibsatay in laga qaadidoono cashuurta ku waajibtay ee aanay hada bixinin.
Waxa iyaguna halkaasi hadalo ka soo jeediyey wasiirada, Arimaha dibada Sacad Cali Shire, Xidhiidhka golayaasha Cali Xaamud, Xanaanada Xoolaha Cabdilaahi Cukuse, Qorsheynta Cali Shoobe. Waxa kale oo iyaguna goobtaas hadalo ka soo jeediyey xubno ka soo baxay xisbiyada Wadani iyo UCID. Sidoo kale waxa iyaguna goobtaas ka hadlay masuuyiinta xisbiga Kulmiye ee UK iyo Sweden, Belgium iyo Holland.